मेरी श्रीमती यात्रा न त इस्टोनिया संग | Apg29
म कहिल्यै मार्फत गरिएको छ रूपमा यो परमेश्व
Aftonbladet placard सेप्टेम्बर 28, 1994।
आज इस्टोनिया को बाल्टिक सागर अन्तर्गत गए जहाज को 25 वार्षिकोत्सव छ। मनमा यो संग, मैले तपाईंलाई सबैभन्दा लामो रात मेरो प्रिय पुस्तक को एक अद्भुत अध्याय देखि इस्टोनिया प्रकोप मेरो आफ्नै गवाही साझेदारी गर्न चाहन्छु।
आज यो 25 वर्ष पछि देखि इस्टोनिया sank, र 852 मान्छे आफ्नो जीवन हराएको छ। मान्छे मात्र 137 बाँचे।
यो यात्री जहाज एम / एस इस्टोनिया स्टकहोम गर्न तेलिन यसका यात्रा बेला बाल्टिक सागर अन्तर्गत गए सेप्टेम्बर 28, 1994।
त्यहाँ 852 मृत्यु कसको बोर्ड मा 989 मान्छे, थिए। यी को, को 501 Swedes। 51 स्वीडिश बाँचे। सबै रूपमा 137 मान्छे बचे।
इस्टोनिया प्रकोप कहिल्यै नर्डिक पानी मा peacetime मा सबै भन्दा ठूलो जहाज नष्ट हुनु हो। यो पनि त्यसभन्दा देर 1900s समयमा भयो को deadliest को छ।
इस्टोनिया गर्न यात्रा
पुस्तक Christer Åberg को सबैभन्दा लामो रात देखि।
यो हुन, वा बरु, Tranås मा महत्वपूर्ण बैठक के गरेनन् एउटा कुरा ठाउँ लिन सक्छ थियो कि कुरा थियो। र यो म कहिल्यै मार्फत गरिएको छ रूपमा, परमेश्वरले सुराकी को सबै भन्दा उत्सुक को एक पनि हो।
म सुरक्षित भयो पछि, म दुई बाइबल स्कूल पछि भयो। दोस्रो बाइबल स्कूल Jönköping पेन्टेकोस्टल चर्च थियो। नाम छोटो, पेन्टेकोस्टल बाइबल कलेज थियो र पादरी Leif Svensson स्कूल टाउको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। स्कूल साँच्चै belonged कलेज Viebäcks र एक वर्ष लामो समयसम्म रह्यो। यो मेरो लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण थियो।
म ठूलो विश्वास Leif Svensson नभएकोले म स्कूल मेरो लागि समाप्त पछि उसलाई सम्पर्कमा रहे। म अब र फेरि उसलाई कल गर्न त प्रयोग। एक यस्तो अवसरमा उहाँले पूर्व सोभियत संघ मा भएको र येशूको बारेमा प्रचार गरेका थिए कि Leif बताए। धेरै मानिसहरू येशूको पाएका थिए र सभाहरूमा सुरक्षित थिए, र यो बिल्कुल शानदार भएको थियो।
मेरो हृदयको एडी। म संग हुन चाहनुहुन्छ मेरो मनमा यो चिच्याए। तर म कहिल्यै सोभियत संघ यात्रा गर्न समय हुनेछ। हाम्रो कुराकानी पछि केही समय विशाल साम्राज्य भंग।
म पछि Leif भनिन्छ, त्यो तिनीहरूले लाटविया गरेको राजधानी, रीगा मा पूर्व कम्युनिष्ट दरबारमा ठूलो मसीही अभियान छ भनेर मलाई भन्नुभयो। म सामेल गर्न चाहन्थे भने उहाँले सोधे, र म, चाहन्थे पाठ्यक्रम। यसलाई फेरि बिल्कुल शानदार थियो: धेरै मानिसहरूले सुरक्षित थिए र विभिन्न रोगहरु sJags को supernaturally निको पार्नुभयो।
यो पनि रीगा दोस्रो यात्रा पछि बन्न थियो। एक ठूलो खेल हल मा यो समय सभाहरू। दुवै अभियान मेरो मनमा गहिरो छाप छोडेर म भविष्यमा थप यस्तो अचम्मको घटना संलग्न हुन चाहन्थे।
Ljungby मा पेन्टेकोस्टल चर्च धेरै अपार्टमेन्ट भाडामा र म अब यसलाई माथि झूट बस्थे एक समय थियो। यो एक ठूलो एक, एक sloping छत र skylights एउटा अटारी थियो। यो एक ठूलो कोठा र एक निकै लम्बी भान्सा र थप एउटा सानो कोठा जस्तो वास्तवमा थियो जो एक alcove थियो। म पनि एउटा सानो कौसी थियो जो घर, मा यसरी राम्रो गरिन्थ्यो। म बालकनी उभिएर जब, म नजिकैको थियो जो स्टेशन, एक राम्रो दृश्य थियो।
ठूलो oblong भान्सा, म मेरो रातो Corded फोन थियो जहाँ मैले एक दिन अप Leif Svensson भनिन्छ। (यो ताररहित फोन मोबाइल फोन 'समय र थियो।) मलाई Leif Svensson भन्नुभयो:
"हामी इस्टोनिया को राजधानी मा एक ठूलो अभियान झेलिरहेका छौं। हामी संग स्टकहोम देखि एक ठूलो यात्री जहाज त्यहाँ जानेछन्। "
मेरो मनमा फेरि एडी। म साँच्चै साथ आउन चाहन्छु। म अघिल्लो दुई अभियानमा भएको थियो किनभने यो हुनेछ कसरी अचम्मको थाह थियो। तर म एक ठूलो समस्या थियो। यो पैसा छ spelled।
"म साँच्चै साथ आउन चाहनुहुन्छ," म Leif गर्न, एक सानो दुःखको कुरा र resignedly बताए। "तर म यात्रा उठयो गर्न सक्दैन। म बस कुनै पैसा छ। "
म यस समयमा भएको हुँदा म मार्जिन मा जीवित थियो, बेरोजगार थियो। म कहिल्यै मलाई अतिरिक्त केही Indulge सकेन। म बेरोजगारी बीमा देखि पैसा प्राप्त, र यो मात्र न्यूनतम आवश्यक पर्याप्त थियो। हरेक छ हप्तामा म केही कारण, एक सानो बढी पैसा को लागि, तर थियो। यसलाई म साँच्चै कहिल्यै गहिराइलाई बुझ्न सकिएन जो एक countervailing कारक, कारण थियो। Leif उठयो सकेन भनेर भनिएको थियो, त्यो अझै पनि स्वस्थ विश्वास भने
"कुनै समस्या छ। हामी व्यवस्था हुनेछ। तपाईं यात्रा धेरै सस्ता प्राप्त गर्न र अरूलाई थाहा छैन। "
यसलाई "साधारण मान्छे" पालन सक्ने हुनाले यी भ्रमणहरू को थियो। तिनीहरूले टिकट आफूलाई भुक्तानी, र त्यसैले तिनीहरू सभाहरूमा विभिन्न तरिकामा सहयोग गर्न सक्षम थिए। तिनीहरूले साथ र अक्सर जो आए र बचत गर्न चाहेको सयौं, मा, मान्छे को लागि प्रार्थना गर्न अरूलाई बीचमा थिए। यी साधारण Swedes पनि बिरामी मानिसहरूलाई लागि प्रार्थना गर्दा तिनीहरूले निको थिए। यो एक धेरै विश्वास-निर्माण थियो पनि, म अब Leif गरेको बाइबल वर्ग पालना र अभियान भाग भनेर थाहा: येशूको चमत्कार र चमत्कार गर्नुभयो जब वास्तविकता मा हुन, अर्को शब्दमा पायो। यसरी तिनीहरूले बाइबल स्कूलमा सिकेका कुरा व्यवहारमा एक अद्वितीय मौका मिल्यो। तिनीहरूले आफ्नै आँखाले यसलाई येशूको विश्वास गर्न काम भनेर हेर्न थियो।
Leif Svensson म पालन सकून् कि, यात्राको लागि राम्रो विज्ञापन गर्न साँच्चै प्रयास गर्नुभयो। उहाँले राम्रो अभियान हुनेछ कसरी मलाई भन्नुभयो र यो कसरी अचम्मको तेलिन गर्न स्टकहोम देखि कला यात्री नौका को राज्य यात्रा गर्न हुनेछ। हामी जहाज मा आफ्नै केबिन मा रहन हुनेछ र म त्यहाँ थप र थप अब खोजीमा थिए। हामी कुराकानी समाप्त अघि Leif उहाँले अभियान पनि मेल गरेर शानदार र stately यात्री बारेमा राम्रो पुस्तिकाको बारेमा जानकारी पठाउन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कसरी यो मेरो ढोका मा मेल स्लट मा slammed म मेरो ठूलो बैठक कोठा सुनेको कुराकानीमा र केहि को thud पछि केही दिन हल भुइँमा उतरा। म यसलाई आइपुगेका थिए कि पोस्ट थियो भने हेर्न सफा ढोका सम्म मेरो आफ्नै? Ket हतारिएको। हो, यो doormat थियो। म इस्टोनिया यात्रा बारे जानकारी पत्र आएको थियो भने हेर्न चाहन्थे। अन्य सबै मेल पत्र, पत्रिका र विज्ञापन यस समय छैन धेरै रोचक थियो। मेरो आनन्द गर्न, म एक ठूलो खैरो Leif Svensson संग प्रेषकलाई रूपमा खाम फेला परेन।
म तुरुन्तै, सामयिक पत्र चक्कु रूपमा मेरो सूचकांक औंला संग खैरो खाम च्यातेर सामग्रीहरू बाहिर झिकेर र यसलाई अलिकति Leif मलाई पठाइएको थियो इस्टोनिया यात्रा बारे amateurish गरे जानकारी पाइएन। मेरो आँखा इस्टोनिया हामीलाई लिन भनेर ठूलो लक्जरी यात्री नौका बारेमा सुन्दर, स्वागत पुस्तिका पनि चाँडै आएको थियो।
म एक काल्पनिक Gaze संग ठूलो जहाज अध्ययन। कार्ड माथिबाट diagonally लगियो। यसलाई पछि लामो सेतो सुनिनु संग नीलो समुद्र मा यात्रा थियो जहाँ जहाज टाढा थियो र व्यापक। म सँग के जान सक्छ भने। के एउटा साहसिक यसलाई थुप्रै तरिकामा हुनेछ।
हो, म पछ्याउन साँच्चै चाहन्थे, तर मेरो मन मा दुख्यो बस म म मा आफैलाई पाइने आर्थिक अवस्थाको सम्झना गर्दा। म के गर्नुपर्छ? खैर, सायद म सधैं के गर्न प्रयोग के मैले समस्या वा आवश्यक केहि गयौं: परमेश्वरको प्रार्थना गर्नुहोस्। म मेरो alcove थियो जो सानो कोठा, मा ओछ्यानमा द्वारा किनभने मेरो घुँडा बाङ्गो, र येशूको नाउँमा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। मलाई यात्रा लागि आवश्यक पैसा दिन उहाँलाई सोधे। एउटा तरिका वा अर्को मा - र तपाईंले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दा प्रार्थना जवाफ प्राप्त गर्न।
म पुरानो मसीही दम्पतीले गर्ने पनि मेरो मित्र थिए लाग्यो। आफ्नो नाम रूथ र Berndt थिए र केन्द्रीय Ljungby मा एक चिरपरिचित हार्डवेयर स्टोर थियो। अब त्यसपछि, म तिनीहरूलाई भ्रमण गर्न प्रयोग। म सधैं तिनीहरूलाई मा स्वागत लाग्यो। कहिल्यै कहिल्यै म जब म आफ्नो ढोकामा भनिन्छ मा आउन अस्वीकार थियो। र यो एकदम अक्सर भयो।
तिनीहरू केवल केन्द्र माथि पहाडी थियो जो पानी टावर, नजिकै बस्थे। यो आफ्नो खैरो ईटा घर सम्म हिंड्न बारेमा बीस मिनेट लाग्यो। म जाँदा यी मित्र हामी ठूलो सुन्दर रहन कोठा मा खैरो सोफा मा बसे गर्दा सधैं मलाई निमन्त्रणा कफी र कुकीहरू।
हामी मसीही भिडियो अक्सर सँगै हेर्न थियो। यस समयमा, यो तपाईं टेलिभिजनमा पूर्व-रेकर्ड चलचित्र हेर्न जब अझै पनि एक वीसीआर लिए। रूथ र Berndt साँच्चै विभिन्न अभियान र संसारभरि सभाहरू मसीही फिलिमहरु संग टन्न भरेर थियो। यो फिल्म धेरै रोचक थिए र तिनीहरूले प्रसिद्ध वक्ता संग थियो। यो तपाईं त्यहाँ पुगेपछि त आध्यात्मिक र शारीरिक जीवन पायो दुवै। हामी येशूको बारेमा पाठ्यक्रम कुरा, र स्वीडेन मा आध्यात्मिक अवस्था बारे।
रूथ र Berndt सधैं बताउन धेरै र गहन तरिका थियो। म पनि हृदय को धेरै थियो, त्यसैले यो अक्सर हामी भेट्दा लेट हुनेछ। हामी सबै तीन समय ट्रयाक गुमाउन गर्छन थियो। त्यसैले यसलाई कुनै आश्चर्य म घर हिंडे अघि यो अक्सर रात भएका थिए थियो। जब म तिनीहरूलाई भ्रमण म लामो रातका लागि सधैं तयार भएको थियो।
एक साँझ यो रूथ र Berndt अर्को भ्रमणको लागि समय थियो। म रेल स्टेशन पार, को पेन्टेकोस्टल चर्च मा मेरो घर बाहिर हिंडे, वर्ग मार्फत हिंडे र त्यसपछि लामो पहाडी अप trudged। हिल माथि म accustomed, आफ्नो घरमा नेतृत्व भन्ने पक्षमा सडक मा पानी टावर बाट गरिएका छोटो पत्थर कदम गए र घण्टी बजाई।
बस ढोका खोल्न र सामान्य स्वागत सेट मलाई अभिवादन। सधैजसो, म न्यानो मेरा साथीहरू द्वारा प्राप्त यो समय लाग्यो। उनीहरूसँग हुन त राम्रो लाग्यो। म अझै पनि एक्लै यो समयमा भएको हुँदा यसलाई मेरो साथ socialize गर्न असल मित्र छ लागि महत्त्वपूर्ण थियो।
हामी सामान्य रूपमा, जीवित कोठा टिभी सोफा तल, कुराकानी, हामी सधैं हामी भेट्दा गर्न प्रयोग के सुरु हेर्नुभयो चलचित्र, कुरा, कफी पिए, हेर्नुभयो चलचित्र, कुरा ... छोटो मा, र घण्टा रूपमा सामान्य उड्यो, शनि टाढा।
कहिलेकाँही लामो साँझ समयमा, म त धेरै मा जान चाहे जस्तै, यात्रा बारेमा कुरा गर्न थाले।
"Jönköping मा बाइबल स्कूल पेन्तिकोसमा मेरो पूर्व बाइबल शिक्षक, Leif Svensson, पूर्वी युरोप मा एक नयाँ अभियान गर्नेछ", म रूथ र Berndt बताए।
"लाटविया लागि फेरि?" उहाँले कफी को एक सानो घूंट पिए र केक अप chewed गर्दा Berndt सोधिने।
उहाँले विशेष गरी पूर्वी युरोप मा, अन्य देशहरूमा evangelization मा एक ठूलो चासो थियो किनभने उहाँले तुरुन्तै रुचि थियो। भिडियो स्क्रिन आफ्नो टेलिभिजनमा flickered, तर अब यसलाई हामी अचानक कुनै पनि यसलाई रुचि थिए थियो। आगामी यात्रा ध्यान थिए, र यो पनि मेरो साथी 'कान पक्रेको थियो। तिनीहरूले म विगतमा यात्राको यी प्रकार गरेको भनेर थाह थियो र तिनीहरूले यात्राको मलाई गर्न चाहनुभएको थियो कति थाह थियो।
"होइन, इस्टोनिया मा तेलिन," म Smitty गरेको प्रश्न मा जवाफ दिन्छन्। "यो एउटा ठूलो पुनरुद्धार संघर्ष एनायन हुनेछ म रीगा मा भएको छु अभियान जस्तै तरिकामा जो।"
"के मजा" त्यो मेरो खाली कप केही थप कफी हालिएको गर्दा मा रूथ ट्याबगरिएको। "तपाईं आउन हुनेछन्?" त्यो, मलाई केक प्लेट सम्म एकै समयमा समातेर म भर्खरै हालिएको कफी लागि पनि एक केक लिन भनेर सोधे।
"म साँच्चै यो चाहन्छु," म, "भन्नुभयो तर त्यहाँ एउटा सानो रोडा छ। म बस यात्राको लागि कुनै पैसा छैन, त्यसैले म जान उठयो गर्न सक्दैन। "
म किनभने म अन्तिम यसलाई उल्लेख जब म साँच्चै गरेनन् लाग्यो। यो जोडी पैसा अर्थात् प्रशस्त थियो। तिनीहरूले Ljungby मा लोकप्रिय र व्यस्त स्टोर लिए। तर हामी सबै को बारे खुल्लमखुल्ला कुरा गर्न प्रयोग, त्यसैले त्यसैले यो मेरो भाग मा साँच्चै कुनै फैलन थियो।
हामी सबै कुरा गर्न जारी, तर घण्टी विगतमा बाह्र बन्न आधा थियो जब, म हाम्रो समुदाय अन्त गर्न समय थियो जसरी कि लाग्यो। हामी अन्त parted अघि कुराकानी अगाडि ढोकामा एक समय को लागि जारी राखे।
म लामो पहाडी तल हिंडे र सामान्य रूपमा थियो अन्धकारमा केन्द्र को ठूलो दृश्य। Streetlamps, घरहरू र पसलहरूमा सुन्दर अप अन्धकारमा बाटो मा फिर्ता शहरको सिनेमा र रेल स्टेशन बीच मेरो घर गर्न रोशनी।
हामी parted पछि त्यो रात म इस्टोनिया यात्रा बारे मा भने थियो के Berndt लाग्यो। म यात्रा मा जान चाहे भने, तर म किनभने धन को कमी को मौका छैन।
"क्रिस को यात्रा अघि फेरि हामीलाई greets भने, म उसलाई पैसा दिन छौँ," Berndt आफूलाई तर्क।
यी विचार म बारेमा पाठ्यक्रम केही को थाह थियो। Berndt उहाँले यदि म यात्रा अघि फिर्ता आउन मलाई, आवश्यक कोष दिन लाग्नुभएको थियो धेरै पछि मलाई भन्नुभयो। यो अनौठो कुरा म गरे थियो।
यो अलौकिक र परमेश्वरको स्पष्ट निर्देशन एउटा सानो भाग थियो। म यात्राको लागि पैसा मागे थियो, तर म पनि एक पत्नी लागि आग्रह गरेका थिए। म चाँडै प्रार्थनाको प्राप्त गर्न अवसर थियो भनेर परमेश्वरले अब काम भएको थियो।
यो समय म बेरोजगार भनेर भनिएको थियो। हरेक छ हप्तामा, म बेरोजगारी बीमा देखि अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त गर्न प्रयोग, र अब यो समय फेरि थियो। यो म पूर्ण भूल थियो, तर जब म मेरो सूचकांक औंला बेरोजगारी बीमा देखि खाम खोल्न काटो संग छु, म तिनीहरूले अतिरिक्त पैसा राख्नु यो समय थियो देखे। अचानक म इस्टोनिया गर्न यात्रा उठयो थियो।
तर केही मेरो मनमा भयो थियो। इस्टोनिया यात्रा मा ब्याज अब त्यहाँ थियो। म पर्खेर गर्दा यो तरिका गायब थियो। यो तेलिन मा योजना अभियान को लागि मेरो हृदयमा धेरै मौन थियो। म अब इस्टोनिया यात्रा गर्न बिल्कुल कुनै इच्छा थियो।
म मेरो साथी टमस, को पेन्टेकोस्टल चर्च मलाई लाग्यो जो र मलाई जित्यो छ येशूले, म अब खातामा थियो अतिरिक्त मुद्रा बताए। उहाँले म इस्टोनिया यात्रा गर्न चाहन्थे कति थाह थियो तर अर्थव्यवस्था पाङ्ग्रा मा एक कुरा राख्नु भनेर।
"तर त्यसपछि यो तपाईं जानु पर्छ भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो!" जब म उसलाई पैसा को समाचार भन्नुभयो उहाँले spontaneously उद्गार। म grimly bit जब म कहिल्यै मेरो जवाफ भूल, तर ठूल्ठूला विश्वस्तता जवाफ छौँ:
"होइन, यो छैन।"
म साँच्चै म भने के थाहा थिएन। यो मेरो मुख र मेरो ओठको बाहिर बस तरिका आए। यहाँ म संघर्ष र इस्टोनिया यात्रा गर्न अनुमति गर्न आग्रह गरिएको थियो। मैले बल्ल मौका मिल्यो, म यसलाई परमेश्वरको इच्छा थिएन।
अब पछि म यो साँच्चै यो भने मलाई थिएन भनेर बुझ्न। यो मलाई बोल्नुभएको थियो जो आत्मा थियो। "आध्यात्मिक" वा cocky दिनु छैन क्रममा, म तल, तर अलिकति थपेर toned, यो:
"म यो महसुस छैन।"
म यो एक बिट त cocksure हुन भन्दा राम्रो सुनिन्थ्यो लाग्यो। तर बयान पछि कुरा अन्त छलफल। थियो थोमस कहिल्यै उठाए थप कुरा - र म त छैन। केही तेलिन मा अभियान सन्दर्भमा मेरो मनमा भयो थियो। मेरो इच्छा पुरा टाढा Blown थियो र म साँच्चै यो बुझ्न सकिएन।
म कतै त्यो समय यात्रा, र म सधैंभरि आभारी छु। त्यस पछि, म यो एक चमत्कारी तरिकामा त्यो बाटो मलाई नेतृत्व गरेकी परमेश्वर थियो भन्ने महसुस।
Linkoping एक जवान महिलालाई मात्र केही मलाई भन्दा साना महिना पनि एउटै यात्रामा जाने बारे लाग्यो। यो महिला थिए, मलाई विपरीत, माथि मसीही परिवारमा हुर्केका थिए। त्यो यसरी सुरक्षित गरिएको थियो र पहिले नै इलाकाका एक इंजीलवादी रूपमा काम गर्न व्यवस्थित थियो। केही वर्ष पहिले त्यो नविकरण लागि येशूलाई भेटे थियो र अहिले परमेश्वरको एक तोकिएको जीवन बस्थे।
उनको मित्र को केही लामो समय यो इस्टोनिया आउन मतलब हुनेछ रूपमा यो अचम्मको र adventurous यात्रामा हामीलाई सामेल उनको प्रभाव गर्ने प्रयास को लागि थियो। तर उनले के थियो कसरी पक्का लागि थाहा भएन। त्यो पालना वा छैन? त्यो Linköping आफ्नो दुई-कोठा अपार्टमेन्ट मा घर मा दुई मन साँच्चै थियो।
उनको आरामदायक भान्सा मा तालिका मलाई साथ यात्रा घर मा नै सटीक पानाहरू थियो। त्यो पाठ्यक्रम सेतो जागा पछि संग नीलो समुद्र मा भव्य जहाज देखाए जो शानदार यात्री लाइनर, बारेमा राम्रो पुस्तिकाको प्रतिलिपि थियो।
त्यहाँ उनको घर मा, त्यो एक कुश्ती आफूलाई साथ र परमेश्वरको दुवै थियो। त्यो कसरी गर्न सक्छ?
छोटो समय पछि, म केन्द्रमा तल भएको थियो र एक मामला गरेको छ। घर बाटो छ कि साँझ मा, म सम्झना यो यति राम्रो, म एक पत्रिका विगतका हिंडे। विशेष गरी मुख्य समाचारहरू एक अरूबाट बाहिर टाँसिएको थियो, म यसलाई तीन बीचमा थियो लाग्छ। म सानो glanced म किओस्क पारित गर्दा विचलित। को शीर्षकहरू, यो ठूलो कालो अक्षर थियो: "डुङ्गा रात मा बाल्टिक मा sank - 800 मृत भन्दा"
डरलाग्दो र निम्न स्तरका löpsedeln बावजुद, त्यसैले म यो बल्लतल्ल उल्लेख गरे। शायद म यो सबै थिएन कि मलाई छोयो, र यो सधैं "यहाँ" कही र हुन्छ कल्पित किनभने। साथै, म यसलाई स्वीडेन मा हामीलाई असर हुनेछ, कि तर अन्य मानिसहरू र देशहरू, गलत विचार लाग्यो। कति मान्छे र म एक बिट समय फरक थियो। दुर्घटना र प्रकोप हुँदा, यो जहिले पनि संसारमा कसैको। यो स्वीडेन मा हुन गर्दैन र पनि कम चिन्तित म को हुँ। अनौठो विचार, तर यो दुर्भाग्य हुन सक्छ।
अर्को बिहान, म चुपचाप बसे र म absentmindedly रेडियो समाचार बुलेटिन सुने गर्दा म मेरो अनाज राख्नु मेरो भान्सा र salami एक सैंडविच मा नास्ता खाए।
Newscaster को बाल्टिक सागर मा एक ठूलो विपत्ति बारेमा कुरा। अचानक म रात पहिले देखेका थिए löpsedeln को सम्झना थियो। एक नौका sunk थियो, र 800 भन्दा बढी मानिसहरू मरे थियो। म थप ध्यान सुन्न थाले। को रिपोर्टर नौका समुद्रको छालहरू अन्तर्गत गएका थिए रात को बीचमा स्वीडेन गर्न इस्टोनिया देखि आफ्नो बाटो मा भएको थियो बताए।
इस्टोनिया? तर यो इस्टोनिया गर्न, म मेरो यात्रा मा गएको थियो थियो? र यो Leif Svensson यात्रा र आफ्नो अभियान भइरहेको थियो भन्ने थियो। उहाँले पनि हुनेछ भन्ने एक ठूलो कम्पनी लागि प्रबन्ध थियो। यसबाहेक, संग हुन लगभग सबै बाइबल स्कूल कक्षा।
Newscaster, "नौका नाम इस्टोनिया छ" सागर तलामा sunk कि नौका को नाम बारम्बार गर्दा मेरो विचार फेरि अवरोध गरेका थिए।
अचानक म पूर्ण रूपमा केन्द्रित र लाग्यो dumbfounded थियो: इस्टोनिया? भन्ने ठूलो डुङ्गा इस्टोनिया हामीलाई लिन भनेर भनिन्थ्यो छैन?
मलाई गुच्छे मा चबाने रोकियो र चम्चा तल राखे। विन्दु ससेज संग स्यान्डविच मलाई होस्, र म सट्टा अखबार ढेर मा देख को अगाडी बाङ्गो। समाचार पत्र र reklarnblad बीचमा म चाँडै जहाज को नाम थाहा प्राप्त गर्न पुस्तिका देख्यो।
म यसलाई फेला अघि लामो थियो। छैन डर बिना म संग पछि छालहरू फोमिंग संग समुद्र मा गर्व यात्रा कि विशाल जहाज चित्र हेर्नुभयो। मेरो नजर विशाल नौका मा स्पष्ट कालो अक्षर लेखिएको थियो जो जहाजको नाम, लागि उत्कट खोजी। तस्विर पट्टी मा जहाज साँच्चै इस्टोनिया नाम।
म पुस्तिका सुन्दर तस्वीर मा stared। समाचार म पनि अब छैन सुने आवाज। अब मेरो मनमा अस्तित्व कि मात्र कुरा जहाज को नाम थियो: इस्टोनिया। म फेरि माथि माथि पढ्न र। सानो बाल्टिक देशको गर्व एम / एस इस्टोनिया तल sunk थियो। मेरो साथी Leif Svensson र आफ्नो सम्पूर्ण कम्पनी शायद बोर्ड मा भएको थियो। र म पनि संलग्न गरिएको थियो।
जब यो मलाई dawned साँच्चै यो इस्टोनिया खसेको गरेका थिए, आफ्नो टाउको मा प्रश्न माथि toted। म भान्सा तालिका मा एक लामो क्षण लागि बसे र अब स्पष्ट भएको बाल्टिक seabed मा झूट, अभियान र अधिक पेशेवर पुस्तिका इस्टोनिया बारेमा सानो amateurish विज्ञापन पुस्तिका मा stared। लगभग काल्पनिक र अलिकति धमिलो, म सँगै के भयो तस्बिर राख्न प्रयास गर्दा दुई पुस्तिका देखे। मेरो विचार Leif Svensson गए। अचानक म आफ्नो पत्नी, सारा कल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई मारा। त्यो छैन त्यो कहिले काँही जस्तै, यो समय यात्रा मा जाने थियो। त्यो अन्य कुराहरू, रीगा पछि अर्को अवसरमा नै यात्रा म बीच, थियो। तर यो समय, त्यो घर मा रहन चुनिएको थियो। म मेरो रातो Corded फोन उठाएको र यांगचोपिंग गर्न 036 नम्बरमा।
त्यो जवाफ अघि मात्र केही संकेत देखा सकेन। शायद सारा बसे र यसलाई र भयो कुरा सुन्न चाहन्थे जो शायद धेरै थियो किनभने फोन, त्यो दिन हेर्नुभयो। Leif धेरै साथीहरू थिए र पाठ्यक्रम पनि कार्य मार्फत मानिसहरूको धेरै थाह थियो। पक्कै पनि आफ्नो प्रियजनलाई बारेमा थप जानकारी खोज्न चाहन्थे जो विद्यार्थीहरूको धेरै परिवार थियो। Sara इस्टोनिया जहाज Leif थियो र सारा पार्टी थियो पुष्टि। त्यसैले त्यो जो म कहिल्यै बिर्सन एक वाक्य भन्नुभयो:
"तर म यति आशा छैन ..."
त्यो Leif fared थियो त्यसैले कुनै आशा थियो। र उहाँले गर्नुभयो। को इस्टोनिया पन्ध्र मिनेटमा sank जब उहाँ र अन्य पास्टर, Lennart Carlsson, बाइबल वर्ग, पार्टी बाँकी धेरै संग, र अरूलाई सयौं रात मारिए समुद्रको गहिराइमा मा।
म एक पटक भन्दा बढी यो घटना बारेमा विचार गर्यौँ। म बोर्ड इस्टोनिया मा गरिएको हुन सक्छ। बरु इस्टोनिया गर्न यात्रा मा साथ निम्न को, म छैन यसको लागि "महसुस" किनभने, घर मा रहन छनौट गरे।
त्यो सुरुमा Leif Svensson गरेको अभियान यात्रा सामेल निर्णय हुनत - Marie नाम Linkoping देखि महिला, खैर, इस्राएललाई भन्दा इस्टोनिया यात्रा गर्न केही कारणले निर्णय गरे।
जब म पछि म परमेश्वरले उनको र मेरो नेतृत्व थियो कसरी अविश्वसनीय पनि अधिक बुझे भनेर सिके।
पुस्तकका Christer Åberg को सबैभन्दा लामो रात Semnos प्रकाशक द्वारा प्रकाशित । अध्याय 2: इस्टोनिया संग यात्रा। पृष्ठ 25-36।